कसरी मारिएका रहेछन् निर्माण व्यवसायी गौचन ? अभियुक्तको बयान – Janaubhar
कसरी मारिएका रहेछन् निर्माण व्यवसायी गौचन ? अभियुक्तको बयान
प्रकाशित मितिः बुधबार, कार्तिक २९, २०७४ | 213 Views ||
काठमाडौं । २३ असोजको मध्यदिनमा निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनको गोली प्रहार भयो । दुई राउण्ड गोली लागेका उनलाई अस्पताल त पुर्‍याइयो तर, मृत्यु भइसकेको थियो ।
राजधानीको व्यस्त सडकमा व्यवसायीको दिउँसै गोली प्रहार भएपछि धेरैले जिब्रो टोके । दिउँसै गोली हानेर व्यवसायीको ज्यान लिँदा पनि प्रहरीले सुइकोसम्म पाएनन् भने आक्रमणकारी सजिलै भागे ।
घटना भएको पाँच सातापछि सुटरसहित ५ जनालाई सार्वजनिक गर्ने क्रममा प्रहरीले घटना कसरी भयो भन्ने केही जवाफ दिएको छ ।
यसरी मारिए गौचन
सदाझैं गौचन त्यो दिन पनि शान्तिनगरस्थित आफ्नो घरबाट बा १३ च ४९४८ नम्बरको ल्याण्ड क्रुजर गाडीबाट महासंघ कार्यालय आउँदै थिए । उनको साथमा थिए, चालक रामकुमार खत्री ।
खरिबोट चोक नजिक दुई जना युवा उनलाई कुरेर बसेका थिए । गौचन सवार गाडी त्यहाँ पुग्ने वित्तिकै २२ वर्षीय प्रकाश बुढाथोकीले ढुंगा प्रहार गरे । गाडीको अगाडीको सिसामा ढुंगा हानेका उनी भागे ।
गौचन हत्याकाण्डको अनुसन्धान समितिका प्रमुख डीआईजी गणेश केसीका अनुसार उनी त्यहाँ कतिवेला निस्किन्छन् ? अन्य मान्छेले देखेका छन् कि छैनन् ? भन्ने हेर्न र ढुंगा हान्न नै बसेका थिए ।
ढुंगा लागेपछि गौचन सवार कार रोकियो । प्रहरीका अनुसार गाडी राकिने वित्तिकै २१ वर्षीय पेशेवर सुटर राजिव स्याङ्ताङले गोली हाने । उनी गाडीको अगाडि गए र ड्याङ … ड्याङ दुई राउण्ड गोली चलाए ।
गोली शिशा छेडेर गौचनको पेटमा लाग्यो । बुढाथोकी र स्याङ्ताङ एकैतर्फ भागे । केहीपर उनीहरुलाई मोटरसाइकल तयार थियो । जुन मोटरसाइकलको व्यवस्थापन गरेका थिए, १८ वर्षीय सन्तोष गुरुङले ।
उनी पर्साको ठोरी गाउँपालिका-५ का हुन् ।
सीसी टिभी फुटेजमा देखिएअनुसार गोली प्रहारपछि स्याङ्ताङले केहीपर पुगेर माक्स र ज्याकेट फ्याले । त्यस दिन उनले सेतो टिसर्ट लगाएका थिए, सोमबार प्रहरीले पक्राउ गर्दा पनि उनी त्यही टिसर्टमा भेटिए ।
उनी नुवाकोटमा लुकेर बसेको अवस्थामा पक्राउ परेका हुन् । बुढाथोकी भने राजधानीमै ठाउँ परिवर्तन गर्दै लुकिछिपी बस्दै आएका थिए ।
उनीहरुलाई हतियार र मोटरसाइकल व्यवस्थापन गर्ने पर्साका ३५ वर्षीय शिवजी महतो र भारत विहारका २४ वर्षीय मुकेशकुमार पाण्डे समेत पक्राउ परेका छन् । घटनामा भारतबाट चोरी गरेर साइन मोटरसाइकल ल्याइ नेपाली नम्बर बा ३५ प २४६१ राखेर प्रयोग गरिएको भेटिएको छ ।
घटनामा प्रयोग गरिएको हतियार भने भारतको वेतियाबाट नेपाली रुपैयाँ ६५ हजारमा खरिद गरिएको खुलेको छ ।
घटनाको विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।
हत्यामा दुई भगौडा आर्मीको पनि संलग्नता
प्रहरीका अनुसार निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष गौचनको हत्याको योजनाकार गुण्डानाइके समिरमान सिंह बस्नेत हुन् । उनलाई मनोज पुनले पनि सहयोग गरेका थिए ।
घटनामा संलग्न भएको अभियोगमा ५ जना पक्राउ परेपनि ८ जना अझै फरार छन् । फरार रहेका मध्ये दुई जना भगौडा आर्मी भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । प्रहरीका अनुसार घटनामा संलग्न श्यामबहादुर गुम्बे र काले दाई भनिने अमरबहादुर राणा आर्मीबाट भागेका भगौडा हुन् ।
घटनामा राणा समेत सुटरको रुपमा प्रयोग भएका थिए । गुम्बे समेत घटनामा सहयोगीको भूमिकामा छन् ।
घटनाको नेतृत्व समिरमान सिंह बस्नेतले गरेका अनुसन्धान टोलीका नेतृत्व गरेका डिआइजी गणेश केसीले बताए । बस्नेत काठमाडौंमा रहेर लामो समयदेखि व्यवसायीबाट चन्दा उठाउने, ठेक्कापट्टामा हस्तक्षेप गर्ने र व्यक्ति अपहरण गर्ने लगायतका कार्यमा संलग्न रहँदै आएका थिए ।
उनले मागे जति रकम नदिँदा गौचनको हत्या भएको प्रहरीले जनाएको छ । यद्यपि, कति रकम हो भन्ने खुलेको छैन ।
यसबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । बस्नेत भारतमा लुकेर बसेको प्रहरीको आशंका छ । युवा संघ, रुपन्देहीका अध्यक्ष दुर्गा तिवारीको हत्यामा संलग्न मनोज पनि फरार अभियुक्त हुन् ।
अर्का अभियुक्त लोप्साङले बस्नेत र पुनकै कमाण्डमा रहेर नेपालमा अपराधिक क्रियाकलाप गर्दै आएको प्रहरीले बताएको छ ।
घटनामा बोका भनिने गंगा लिङ्देन लिम्बुको संलग्नता समेत खुलेको छ । बस्नेतको पारिवारिक नाताभित्र पर्ने रोशन बुढाथोकी समेत सम्पूर्ण काम फत्ते गर्न प्रयोग भएका थिए । घटना संलग्न अर्का अभियुक्त अजय थापा समेत फरार छन् । उनीहरु यसअघि पनि अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न थिए ।
Prevकोरियाली प्रायद्वीपमा अमेरिकाले आणविक युद्धको खतरा बढायोः उत्तर कोरिया
Nextसमानुपातिक उम्मेदवार दामा शर्मा भन्छिन्– ‘संविधान बनाइयो, अब जनतासँगै विकास कार्यमा लाग्नेछु’